बिश्वकै दोश्रो चर्चित गायिकामा नेहा कक्कड,पहिलो को ? – Everest Pati
बिश्वकै दोश्रो चर्चित गायिकामा नेहा कक्कड,पहिलो को ?
काठमाडौं। युवापुस्ताकी सर्वाधिक लोकप्रिय भारतीय गायिका नेहा कक्कडको चर्चा निक्कै हुन थालेको छ । उनी युवापुस्ताको ढुकढुकी बन्न थालेकी छिन् । हालै एक सर्वेक्षणले उनि संसारमा सर्वाधिक खोजी हुने गायिकाको सूचिको दोस्रो स्थानमा परेको जनाएको छ। संसारभर युट्युबमा सबैभन्दा धेरै सर्च गरिने महिला कलकारमा नेहा दोस्रो नम्बरमा परेकी हुन्।
उनले ब्राजिलियन गायिका मरिलिया मेन्डोन्का, अमेरिकन गायिका अरिना ग्रान्डी, कोलम्बियन गायिका करोल जी, साउथ कोरियन गर्ल ग्रुप ब्ल्याक पिंकलगायत ठूला स्टारलाई पछाडि पार्दै उनले दोश्रो स्थान हात पारेकी हुन् । उनले यसमा खुशी जनाउँदै इन्स्टाग्राममार्फत आफ्ना फ्यानलाई धन्यवाद दिएकी छिन्।
त्यस्तै, नेहालाई चार अर्ब ५० करोड दर्शकले खोजेका छन् भने नेहाभन्दा अगाडि अमेरिकन र्‍यापर कार्डी बी छिन्। उक्त सर्वेक्षणअनुसार कार्डी बीलाई चार अर्ब ८० करोड दर्शकले युट्युबमा सर्च गरेका छन्। उनी इन्डियन आइडल सिजन–६ बाट सांगीतिक क्षेत्रमा उदाएकी हुन्। उनका आवाजमा रहेका थुप्रै गीतहरु चर्चित बनेका छन्। हाल उनी इन्डियन आइडलकी जज छिन् ।
राजधानीबाट सेनाका पूर्वसहायक रथी र सशस्त्र प्रहरीका पूर्वएआईजी प’क्राउ